Soo dejisan Remote Mouse 2801 – Android – Vessoft
AndroidShabakadGelitaanka fogRemote Mouse
Bogga rasmiga ah: Remote Mouse
Mouse Remote – software ah oo loogu talagalay gacanta ku computer fog oo ah. software waa ay awoodaan in ay si buuxda u jilo function ka mid ah mouse iyo keyboard. Remote Mouse synchronizes qalabka la computer ah iyada oo caadi ah Wi-Fi ah maareynta fog. software The kuu ogolaanayaa inaad Customize dareen mouse lagu jiro gacanta touchpad ah, qaab ee laga soo galo qoraalka iyo xawaaraha ee boggan kor ama hoos. Sidoo kale Remote Mouse awood si loo ballaariyo fursadaha ay isku Xidhka daro kala duwan.
istuuray Buuxi ah mouse iyo keyboard
Isticmaalka of tuuryo keyboard ah
hab wada dhaqdhaqaaqayeen
Soo dejisan Remote Mouse
Faallo ku saabsan Remote Mouse
Remote Mouse Xirfadaha la xiriira
ES File Explorer – maamule fayl awood leh si uu u maareeyo feylashaaga iyo codsiyadaada. Software-ka wuxuu leeyahay aalado fara badan oo tayadeeya howlgalka.